झ्यालमा बालुवाका बोरा राखेर युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको पत्रकार सम्मेलन, के-के भने ? – Nepal Online Khabar
झ्यालमा बालुवाका बोरा राखेर युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको पत्रकार सम्मेलन, के-के भने ?
फागुण २१, २०७८ शनिबार 146
एजेन्सी : रूसले आ,’क्रमण गरिरहेको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। रूसी आ,’क्रमण सुरू भएपछि अनौप’चारिक पहिरनमा भिडिओ
सार्वजनिक गर्दै युक्रेनी जनतालाई साहस दिइरहेका जेलेन्स्की अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग भेट्दा पनि त्यस्तै पहिरनमा थिए। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुग्न पत्रकारहरूले सडकमा थुप्रै
अ’वरो’धकहरू पार गर्नुपरेको थियो। रूसी ट्यां’कहरूलाई अवरोध गर्न ती अ’वरोधक बनाइएका हुन्। राष्ट्रपति भवनभित्र जेलेन्स्कीको कार्यालयका झ्यालमा बालुवाका बोराहरू राखिएको टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा ह,’तियार बोकेका सुरक्षाकर्मी सँगै उभिएका थिए। जेलन्स्कीले अहिले आफू रातमा तीन घन्टामात्र सुत्ने गरेको बताएका थिए। झुस्स दाह्री भएका र थाकेजस्ता देखिने जेलेन्स्कीले रूसी आ,’क्रमणमा युक्रे’नीले गरेको प्र’तिरोधको प्रशंसा गरे।
‘युक्रेनीहरूको साहसका बलमा म बलियो र निर्णायक भएको छु,’ जेलेन्स्कीले भने। उनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताए। ‘म पुटिनसँग कुरा गर्न चाहन्न भन्ने होइन,’ उनले भने,‘मैले पुटिनसँग कुरा गर्नुपर्छ, सारा विश्वले पुटिनसँग कुरा गर्नुपर्छ।
यो यु,’द्धलाई रोक्न त्योबाहेक अर्को कुनै बाटो छैन।’
युक्रेनको सार्वभौमसत्ता बाहेक अरू केही बुँदामा आफू सम्झौता गर्न तयार रहेको उनले बताए। रूसीहरूले पहिला नै सबै प्रश्नको उत्तर तयार पारेकाले अहिले वार्ता गरेर नयाँ
कुरा आउन सम्भव नभएको उनले बताए। रूसी आक्र-मणको प्र’तरोध गर्न पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रे’नलाई अझै सै’न्य सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले फ्रान्स र जर्मनीसँग यु’क्रेनलाई नो फ्लाई जोन घोष’णा गर्न पनि आग्रह गरे।
Prevकाँग्रेसले अब बहुमतका साथ ५ वर्ष आनन्दले सरकार चलाउँछ :- गगन थापा
Next“अब राप्रपालाई कसैले रोक्न सक्दैन” :- अध्यक्ष लिङ्देन !
आज नेप्से १६ दशमलव ४१ अङ्कले बढेर तीन हजार एक सय ७९ विन्दुमा पुग्यो ।
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घन्टामा ५६६ स’ङ्क्रमित थपिए !
कालीगण्डकी डाइभर्सन नरोकिए सङ्घर्षमा उत्रिने मुख्यमन्त्रीकाे चेतावनी